Njọhie 10 otu ụlọ ahịa ejiji n'ịntanetị kwesịrị izere | ECommerce ozi ọma
Nhiehie 10 ụlọ ahịa ejiji n'ịntanetị kwesịrị izere
Eva Maria Rodriguez | | Eziokwu na akụkọ, Marketing, StartUps na ndi oru itumgbere ahia
Trendy onye ndụmọdụ, el ekike ntanetị ntanetị 100% Spanish, taa wepụtara ndepụta nke ụdị mmejọ 10 dị na ụlọ ahịa ejiji n'ịntanetị.
Ebumnuche ndị a ka ịduzi ndị ọchụnta ego na eCommerce nke ejiji mpaghara na otu esi emeziwanye okwu ndị dị mkpa metụtara ụlọ ọrụ gị, dị ka ọnụego ntụgharị ma ọ bụ ojiji nke ibe gị iji melite ahịa gị.
1 Ihe iri na-ahụkarị 10 na ụlọ ahịa ejiji n'ịntanetị ị kwesịrị izere
1.1 # 1 - ratelọ ọrụ na-eri ụlọ ahịa
1.2 # 2 - Anyị na-ere ngwaahịa sitere n'oge ndị ọzọ.
1.3 # 3 - Foto nke uwe na hangers
1.4 # 4 - ozi ezighi ezi banyere ngwaahịa
1.5 # 5 - Mbupu ụgwọ maka onye zụrụ ahia
1.6 # 6 - Email dị ka naanị ụdị kọntaktị
1.7 # 7 - Ihe oyiyi na-adịghị mma
1.8 # 8 - Ileghara omume onye ọrụ anya
1.9 # 9 - Ihe nchọgharị weebụ dị mgbagwoju anya
1.10 # 10 - Rụọ ọrụ ịkwado site n'oge ruo n'oge
Ihe iri na-ahụkarị 10 na ụlọ ahịa ejiji n'ịntanetị ị kwesịrị izere
# 1 - ratelọ ọrụ na-eri ụlọ ahịa
Ọ bụghị ihe ọjọọ na anyị chọrọ ịnye ụlọ ọrụ ozi na ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị iji chọta onye ọrụ ma nweta ntụkwasị obi ha.
Ma onye ọrụ na-abịa ịzụta. Ihe omuma ahia gha agha karie ma di nfe inweta site na mgbe ibanye na peeji a.
# 2 - Anyị na-ere ngwaahịa sitere n'oge ndị ọzọ.
Onye na-azụ ahịa ịntanetị hụrụ azụmahịa. Oke kachasị na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị bụ ịnye ọtụtụ katalọgụ nke ngwaahịa, yana n'ụdị dịgasị iche iche, ịnweghị ike ịnweta ngalaba ọpụpụ na uwe site na oge ndị ọzọ na ọnụahịa dị mma.
Mana enweghikwa nlezianya nhọrọ nke ngwaahịa ohuru, nke na-emezigharị ihe a na-enye ma na-egosi mmetụta na ụlọ ahịa gị '' ruru ụbọchị '.
# 3 - Foto nke uwe na hangers
N'ihe oyiyi ahụ, nnukwu ọdịiche dị n'etiti foto nke uwe na-esite na hanga na otu ihe nlereanya na-eyi otu uwe ahụ. Nke abụọ ga-adọrọ mmasị karị ma na-enye onye ọrụ ihe ọmụma dị ukwuu banyere otu uwe ahụ si eche.
Ọ bụ ya mere o ji baa uru itinye ego na foto ọkachamara na ụdị nke na-eweta ngwaahịa anyị n'ụzọ kachasị mma.
# 4 - ozi ezighi ezi banyere ngwaahịa
Anyị ga-eweta ahụmịhe n'ịzụta ọnlaịnụ dịka o kwere mee na ịzụrụ na ụlọ ahịa anụ ahụ, ebe onye ahịa nwere ike imetụ aka ma nwaa uwe ahụ. Na ihe niile a na-enweghị mgbagwoju anya usoro nnweta. Ọ bụ ya mere na ịmachi data dị na ọnụahịa na nha abụghị ụzọ.
A ghaghị ịnye ozi dị mkpa karị, dị ka ngwakọta ákwà, ọnọdụ ịsa ahụ ma ọ bụ data ndị ọzọ na mmasị.
# 5 - Mbupu ụgwọ maka onye zụrụ ahia
Ndị na-azụ ihe n’ Onlinentanet ekwenyeghị site n’iche na ha ga-akwụ ụgwọ mbupu, ebe ha ghọtara na otu ngwaahịa ahụ dị na ụlọ ahịa anụ ahụ na-enweghị iche na mmụba a na ọnụahịa.
Maka atụmatụ azụmaahịa ka mma, anyị nwere ike ịrụ ọrụ na ahịrị abụọ. Nke mbụ ga-abụ itinye opekempe pasent na ngwaahịa nke na-ekpuchi ụgwọ mbupu ndị a; nke abụọ ga-abụrịrị iji kwụọ ụgwọ njem njem na nke kachasị, na-eji ohere dị mma nke mbupu anyị.
# 6 - Email dị ka naanị ụdị kọntaktị
Gbachi nkịtị na email dị ka ụzọ nke kọntaktị abụghịzi nnata. Inwe ọtụtụ ọwa nkwukọrịta na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na-eme ntụkwasị obi ma na-enye aka na iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa. Ekwentị, nkata, netwọkụ mmekọrịta ma ọ bụ, nke ka mma, ha niile.
Ndị ahịa ọ bụla nwere mmasị ịga ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma, ọkachasị na mkpesa.
# 7 - Ihe oyiyi na-adịghị mma
Onye kọntaktị mbụ nke onye ọrụ na ngwaahịa ahụ sitere na foto ndị ahụ, ọ bụkwa kọntaktị bụ isi ebe ọ bụ, dabere na echiche ha banyere foto, nke a ga-abụ foto izizi ewepụtara na ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị.
Ọ ka mma iji foto ole na ole ahọpụtara nke ọma na nzụlite ọkụ nke na-enye gị ohere ịhụ nkọwa dị mma karịa ọtụtụ eserese na-adịghị elekwasị anya ma ọ bụ nke adịghị mma.
# 8 - Ileghara omume onye ọrụ anya
Otu n'ime ike nke azụmahịa ọ bụla n'ịntanetị ga-abụ nyocha na nsochi na-aga n'ihu nke omume onye ahịa anyị ka ha na-agabiga weebụsaịtị anyị.
Agbanyeghị na nke a gụnyere ụgwọ ọzọ, ịmara ihe kpatara na ndị ọrụ anaghị aga 'ịtụgharị', ma ọ bụ ihe kpatara ọtụtụ agbahapụ agbapụ bụ isi okwu anyị nwere ike idozi. Ngwaọrụ dịka nchịkọta Google ma ọ bụ Clicktale na-akwado njikwa a.
# 9 - Ihe nchọgharị weebụ dị mgbagwoju anya
Ihe dị mfe igodo site na ibe gị, ọ ga-adịrị onye ọrụ ahụ mma.
Ndị na-azụ ahịa na-enwe mmasị ị bea ntị na ya, otu ụzọ ị ga-esi mee nke a na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị bụ site na-eleba anya na profaịlụ ha na mmasị ha ma na-enye ha ụzọ ntụgharị metụtara njirimara ha. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-eme ka ịzụta gị ọsọ ọsọ ma mee ka ị chee na ụlọ ahịa ahụ amata.
# 10 - Rụọ ọrụ ịkwado site n'oge ruo n'oge
Ọnọdụ SEO na SEM dị mkpa iji pụta na nsonaazụ ọchụchọ mbụ. Ma ọ bụrụ na ị naghị arụ ọrụ oge niile ma na-emeso naanị mgbe ụfọdụ na omume ụfọdụ, a ga-echefu gị n'oge na-adịghị anya. Gwakọta mgbasa ozi na Google Adwords na netwọkụ mmekọ na ngwa ndị ọzọ na-achọ enyemaka na -emepụtakwu okporo ụzọ na visibiliti na ibe gị.
Carlos Jordana, Onye Mmekọ nke TrendyAdvisor na-emesi obi ike:
Onlinewa ntanetị dị mgbagwoju anya na ejiji bụ asọmpi asọmpi. Inweta okporo ụzọ na onye ọrụ nwere afọ ojuju zuru oke na ahụmịhe zuru oke bụ ebumnuche nke ụlọ ahịa ejiji n'ịntanetị ọ bụla kwesịrị ịchụso. Inweta ya ga-adabere n'ọtụtụ ihe ekwesiri iburu n'uche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » StartUps na ndi oru itumgbere ahia » Nhiehie 10 ụlọ ahịa ejiji n'ịntanetị kwesịrị izere